Hindiya waxay kor u qaadday awoodda duullimaadyadeeda 85% heerarkii ka horreeyay COVID
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindiya waxay kor u qaadday awoodda duullimaadyadeeda 85% heerarkii ka horreeyay COVID
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Hindiya waxay sare u qaadday awoodda duulimaadkeeda 85% heerarkii ka horreeyay COVID
Isbeddellada ay ku dhawaaqday Wasaaradda Duulista Hawada ayaa u saamaxaya shirkadaha diyaaradaha Hindiya inay duulimaadyo dheeraad ah sameeyaan waxayna kor u qaadi doonaan culeyska rakaabka marka la gaaro xilliga ciidda qaranka bisha soo socota.
Dowladda Hindiya waxay dejineysaa xannibaadaha muddada COVID-ka ee saaran shirkadaha diyaaradaha ee dalka.
Shirkadaha diyaaradaha ee Hindiya ayaa hadda loo oggolaan doonaa inay ku shaqeeyaan boqolkiiba 85 awooddooda ka hor masiibada.
Diyaaradaha gudaha ee Hindiya ayaa sidoo kale loo oggolaan doonaa inay jaangooyooyinkooda u dejiyaan tikidhada wixii ka dambeeya 15 maalmood ee taariikhda ballansashada.
Wasaaradda Duulista Hawada ee Hindiya ayaa maanta kor u qaadday awoodda qaadista hawada gudaha, taas oo u saamaxaysa shirkadaha diyaaradaha ee Hindiya inay ku shaqeeyaan 85% awoodihii ka horeeyey ee COVID-19 halkii ay hadda ka ahaayeen 72.5%.
Hay'adda duulista rayidka ah ee Hindiya ayaa sidoo kale beddeshay qaaciddada sicirka qiimaha, taas oo u oggolaanaysa shirkadaha diyaaradaha ee gudaha inay jadwalka tikidhka u goostaan ​​wixii ka dambeeya shan iyo toban maalmood oo ah taariikhda ballansashada.
Ilaa hagaajinta maanta, koofiyadaha qiimaha ayaa lagu dabaqi jiray tigidhada ilaa 30 maalmood laga bilaabo taariikhda ballansashada.
Isbeddelada ay ku dhawaaqeen Wasaaradda Duulista Hawada waxay u oggolaan doontaa shirkadaha diyaaradaha Hindiya inay duullimaadyo dheeraad ah sameeyaan waxayna kor u qaadi doonaan culeyska rakaabka marka la gaaro xilliga ciidda qaranka bisha soo socota.
Duulimaadyada hawada gudaha ee Hindiya ayaa kordhay 34% ilaa 6.7 milyan bishii Ogosto iyada oo loo eegayo is xigxiga xagga dambe ee kororka awoodda ilaa 72.5%.
Tallaalka oo kordhay iyo shuruudaha tijaabinta COVID-19 oo dabacsan ayaa iyagana caawiyay. Degenaanshaha warshadaha oo dhan ayaa aad kor ugu kacay 70% bishii hore.
Dabcinta awoodda duulimaadka iyo fududeynta xannibaadaha qiimeynta ayaa timid kadib dhowr wareeg oo wada -xaajood ah oo dhex maray Wasaaradda Duulista Rayidka ee Hindiya iyo agaasimayaasha guud ee shirkadaha diyaaradaha Hindiya.
Tallaabada lagu qaadayo awoodda iyo qiimayaasha ayaa si aad ah ugu kala qaybisay warshadaha Ronojoy Dutta, oo ah maamulaha shirkadda ugu weyn India IndiGo, isagoo ku baaqay in meesha laga saaro faragelinta dowladda ee qiimaha iyo awoodda, isagoo sheegay in tani ay ka horjoogsanayso shirkadaha diyaaradaha inay qaataan go'aanno ganacsi ku saleysan.
Hawl -wadeennada garoomada diyaaradaha ee ugu waaweyn dalka —Delhi, Mumbai, Bangalore - ayaa ku boorriyay dowladda inay soo afjarto koofiyadaha awoodda iyo qiimaha maadaama ay tani caqabad ku tahay soo laabashada rakaabka iyo inay si xun u dhaawacdo dakhliyada garoomada diyaaradaha ee inta badan sida gaarka ah loo leeyahay ee Hindiya.